Fanafihana nisesy :: Maty voatifitra ny roa lahy nandroba fiara sady nangalatr’omby • AoRaha
Fanafihana nisesy Maty voatifitra ny roa lahy nandroba fiara sady nangalatr’omby
Avy nandroba taksiborosy dia nanafika tanàna sy nangalatr’omby ny andian-jiolahy tany Isoanala, distrikan’i Betroka, tamin’ny alin’ny alarobia lasa teo. Niroso tamin’ny fanenjehana ny zandary. Maty voatifitra ny roa tamin’ireo dahalo. Azo sambo-belona ny iray. Mbola karohina ny efatra ambiny. Tafaverina ny omby rehetra voaroba sy ny entana sasany tao amin’ilay fiara voatafika.
Nandeha tany amin’ny lalam-pirenena faha-3 ny fiara karandalana iray nitondra olona ho any Taolagnaro. Niaraka tamin’io fiara io ny atleta amin’ny taranja atletisma solontenan’ny faritra Anosy avy niatrika fifaninanam-pirenena tao Antsirabe Vakinankaratra. Niharam-boina ny fiara, nony tonga tany amin’ny fito kilaometatra atsimon’Isoanala, tokony ho tamin’ny 11 ora alina.
“Nandeha teo amin’ny lalan-dratsy ilay taksiborosy ka voatery nandeha niadana. Tsy nisy tanàna ihany koa teo amin’ny manodidina. Teo no nanararaotan’ireo olon-dratsy. Nitifitra voalohany izy ireo. Nokendrena ny mpamily saingy tsy voa. Niantefan’ny bala tamin’ny tifitra faharoa izy, taorian’izay”, araka ny fampitam-baovao avy amin’ny zandary any Isoanala.
Nirohotra nanatona ireo mpanafika rehefa tafajanona ny fiara. Nalain’izy ireo ny bisikileta roa nifatotra teny ambonin’ny fiara. Voaroba ny entana mitentim-bidy manodidina ny 12 tapitrisa ariary. Tonga tany an-toerana ny zandary. Noentina tany amin’ny CSB II ilay mpamily voatifitra. Natomboka avy hatrany ny fanarahan-dia.
“Nisy dahalo nangalatra omby sivy tany Andaro, tamin’io alina io ihany. Nifanehitra tamin’ ireo dahalo ny zandary ka raikitra ny fifampitifirana. Nisy ny lavo sy ny voasambotra. Nilaza itsy farany fa izy ireo no nandroba an’ilay taksiborosy. Natorony ny toerana nanafenana ny entana voaroba”, hoy hatrany zandary.
Tsatok’antsy teny Anosibe :: Lehilahy namono ny vadiny sy nandratra olona telo
Ahiahina herisetra :: Hanadihady momba an’i Tahisy ny Polisim-pirenena